प्रश्न खरिद गर्ने?
1 वर्ष6महिना पहिले #856 by PAYSON
मैले भर्खरै एउटा पीटर हॉथर्नबाट इमेल प्राप्त गरें। उहाँ र उहाँका केही सहकर्मीहरू जस्तै आवाज रिक्ओसँग मर्ज गर्न चाहानुहुन्छ। कृपया पढ्नुहोस् र हेर्नुहोस् यदि तपाईं सोच्नुहुन्न कि यो लाइनमा सबैभन्दा उत्तम निःशुल्क वेयर साइटको अन्त जस्तो लाग्छ। तपाई के सोच्नुहुन्छ हेर्नुहोस्
1 वर्ष6महिना पहिले #857 by rikoooo
माफ गर्नुहोस् तर मेरो बारेमा के कुरा गरिरहनु भएको सुराग छैन ...?
र मलाई थाहा छैन पत्रुस हॉर्थर्नो।
1 वर्ष6महिना पहिले #858 by PAYSON
डिसेम्बर 11 (1 दिन पहिले)
मैले भर्खरै FSX, FSX-Steam र Prepar3D - Rikoooo को लागि डाउनलोडहरू पढें, मैले यसलाई केही साथीहरूलाई देखाइदिएँ र हामी हाम्रो बीचको सहयोग राम्रोसँग काम गर्न सक्दछ।
म एक डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी को प्रतिनिधित्व गर्दछ जसलाई वर्तमान मा एक अग्रणी प्रौद्योगिकी कम्पनी संग काम गर्दछ जो एन्ड्रोइड को रूपमा एक नै बजार मा कार्य गर्दछ। हामी हाम्रो ग्राहकको तर्फबाट तपाईंको साइटमा सामाग्रीको एक अनोखी टुक्रा फिचर गर्न चाहन्छौं। विशेषाधिकारको लागि, हामी $ 65 को क्षेत्र मा कहीं पनि तिर्न खुशी हुनेछौं।
मलाई तपाईंको विचारहरू थाहा दिनुहोस्।
1 वर्ष6महिना पहिले #859 by PAYSON
2: 34 AM (13 घण्टा पहिले)
मलाई फिर्ता लिनको लागि धन्यबाद।
हामी के गर्छौं भन्ने कुरामा एक विचार दिनको लागि, हामी तपाईंको साइटको लागि प्रायोजित सामग्री लेख्न खोज्छौं। यो सामग्री सामान्यतया 500-शब्द आलेखको रूपमा आउँदछ र यसमा हाम्रो ग्राहकको 'डाउ-फ़ॉलो' लिङ्क समावेश हुनेछ। यस लेखका लेखकले तपाईको साइटमा समय बिताउनेछ र टोन, शैली, र सामान्यतया पोष्ट पोस्ट गर्ने सामग्रीको लागि एक महसुस गर्नेछ। तिनीहरू जान्छन् र तपाईंको ब्लगको लागि एक अनुकूल लेख लेख्न सक्दछन्। यदि तपाइँ यसलाई उपयुक्त छैन भने लेखको समीक्षा, सम्पादन र अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईंको साइटमा योगदान दिन चाहन्छौं र यसलाई पोस्ट गर्नको सुअवसरको लागि तिर्नुहोस्। यद्यपि, हामी हाम्रो ग्राहक वा ब्रान्डको नाम यस चरणमा विभाजन गर्दैनौं - सामान्यतया केवल लेखहरू समीक्षाको लागि पठाइएपछि मात्र।
जबसम्म तपाईं सहज हुनुहुन्छ, हामी पनि अनुरोध छ कि पोस्ट 'प्रायोजित' को रूपमा चिन्ह लगाइएको छैन।
यस सन्दर्भमा, तपाइँ प्रायोजित पदहरू स्वीकार गर्नुहुनेछ www.rikoooo.com/ ? यदि हामीले हाम्रो अघिल्लो इमेलमा प्रस्ताव गरेको मूल्य ($ 65 प्रति पोष्ट) तपाइँलाई स्वीकार्य छ भने, कृपया मलाई थाहा दिनुहोस् ताकि हामी अगाडि बढ्न सक्नेछौं।
1 वर्ष6महिना पहिले #860 by PAYSON
यी इमेलहरू मैले प्राप्त गरिरहेको छु। म तपाईलाई मेरो चिन्ता मान्नुहुन्छ। मलाई सोच्दैन कि म पनि हेर्न चाहन्छु। SNAFU को केहि प्रकार।
1 वर्ष6महिना पहिले - 1 वर्ष6महिना पहिले #861 by rikoooo
तपाईंको जवाफको लागि धन्यवाद,
यो वास्तवमा स्प्याम हो र ती इमेलहरू प्राय: स्पामर वा बोट द्वारा उत्पन्न हुन्छन्।
तिनीहरूलाई जवाफ नदिनुहोस्
अर्को उदाहरण यहाँ: www.mail-archive.com/[email protected]/msg28201.html
अन्तिम सम्पादन: 1 वर्ष6महिना पहिले rikoooo.
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.275 सेकेन्ड